Mgbaaka okirikiri na warara track Hultsfred to Målilla | Nleta Hultsfred
Mgbaaka okirikiri na warara track Hultsfred ka Målilla
hem » Hụ & mee » Ihe » Cygba ígwè » Mgbaaka okirikiri na warara track Hultsfred ka Målilla
Ihe njem na-echere gburugburu akụkụ! Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbịaru nso na ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị warara, mara otu nkwonkwo okporo ígwè ọ bụla ma nwee obi ụtọ na okike, enwere ohere ịkpụgharị ejiji.
Start na-amalite ịgba ịnyịnya ígwè si Hultsfred kwupụta Målilla sanatorium, anya nke 11,5 km otu ụzọ, Ọ na-ewe ihe dị ka elekere iji gbaa 11 km. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbagharị n'ụzọ dị mfe na egwu ndị dị otú ahụ dị anya na-arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi maka ụmụaka ndị toro eto ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịzọ ụkwụ onwe ha.
Mgbe ihe dịka ọkara anya, ihe dịka 5 kilomita site na Hultsfred, ị gafere obodo ahụ Ödhult. N'ebe a, enwere ebe izu ike mara mma na tebụl kọfị, ihe mkpofu na bọl maka ụmụaka.
Mgbe ị rutere Målilla ihe dị ka kilomita 10 site na Hultsfred, ụzọ dị warara na-apụ n'Ọdọ Mmiri Hesjön. Usoro ahụ na-aga ogologo ọdọ mmiri ahụ wee soro n'akụkụ osimiri nke Hesjön. Nke a bụ ebe ezumike na tebụl kọfị na dass. Ebe izu ike na Hesjön bụ ebe zuru oke iji nwee ọfụma kọfị tupu ị gaa n'ihu na nke ikpeazụ n'ime Målilla na nkwụsị Målilla sanatorium. Na Målilla sanatorium ị na-ahụ ọmarịcha obere bọs na-akwụsị ma ọ bụ ebe a ka ngalaba ejiji si Hultsfred kwụsịrị.
Mọnde-Fraịde 09.00 na 13.30
Na-eme na mbata site na kaadị ma ọ bụ swish. Ego mgbazinye ejiji bụ n'efu.
Sjövägen, 577 38 Ezenwankwo, Sverige
4.6 si 5.0
Nyocha 96 na Google
5/5 ọnwa 3 gara aga
Ụzọ ije mara mma mara mma n'akụkụ Hulingen !! Edoziri nke ọma
5/5 ọnwa 5 gara aga
Kedu ahụmịhe sitere na akwa akwa n'ime ọhịa anwansi nke agwakọtara na ala ahịhịa juru na urukurubụba na ọdọ mmiri .. Uwe dị mfe azọpịa n'agbanyeghị na anyị bụ +70. Nweta nke a ị gaghị akwa ụta.
5/5 ọnwa 6 gara aga
Fun ma a bit ike, ebube ebe
Njem nlegharị anya Kalasfin. Ọ dị mfe ịde akwụkwọ, nnabata dị mma yana akara ya nke ọma.
Haziri nke ọma ma dịkwa mfe ịnweta.
Mgba okirikiri na warara track Flaten - Gårdveda
Uzo eji eme njem na warara track Virserum ka Åseda
All ịnyịnya ígwè na dressage ụzọ ụkwụ